XOG: DF oo ciidan gaar ah kor dejisay deegaanada ay ku badan yihiin musharaxiinta mucaaradka | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: DF oo ciidan gaar ah kor dejisay deegaanada ay ku badan...
XOG: DF oo ciidan gaar ah kor dejisay deegaanada ay ku badan yihiin musharaxiinta mucaaradka
Ciidamada Haramcad ayaa lagu amray in ay la wareegaan dhammaan deegaanada ku xeeran Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, halkaas oo ay degan yihiin badi musharaxiinta madaxweynaha eek u kacsan Dowladda Federaalka.
Illo xog ogaal ah oo ka tirsan taliska Ciidanka Haramcad ayaa nala wadaagay in qorshahana oo ka soo baxay taliska NISA laga damacsan yahay sidii loola socon lahaa dhaq dhaqaaqa ciidan eek a jira deegaanada ay ku badan yihiin musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ah, kuwaas oo wada dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo ka dhan ah Villa Soomaaliya.
Taliyaha Ciidanka Booliska ah ee sida gaarka ah u tababaran Faarax Qaroole ayaa la sheegaya inuu qaatay amarkaas, wuxuuna saacadihii la soo dhaafay ciidamo ku daad gureynayay fariisin ay ciidankiisa ka sameysteen deegaanada ku dhow Garoonka Aadan Cadde.
Taliska NISA ayaa walaac ka muujiyay tallaabooyinka qaar ay qaadi karaan midowga musharaxiinta, maadama Dowladda Federaalka ay kordhisay cadaadiska iyo burinta ay ku heyso.
Midowga Musharaxiinta ayaa laga hor istaagay banaanbax ay damacsanaayeen in ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho maalintii jimcaha ahayd taas oo sababtay iska hor imaad u dhaxeeyo Ciidanka Dowladda iyo Mucaaradka